13 / 10 / 2018 | RayHaber | raillynews
Maalinta: Oktoobar 13, 2018
Jimicsiga shilalka diyaaradaha ee Dardanelles
Tababbarka loo abaabulay iskuduwida garoomadayada si loo yareeyo waxyeelada shilalka diyaaradda iyo in la tijaabiyo howlaha hawlgalka ma ahan kuwa run ah. Ağrı Ahmed-i Hani, Şanlıurfa GAP iyo Çanakkale [More ...]
Awoodda Kordhinta Gaadiidka Dadweynaha ee Alanya
Kulankii Oktoobar ee Magaalada Caasimadda ah ee Antalya, laga bilaabo gawaarida 60 oo wata gawaarida 33 illaa mitirrada 12, 7 [More ...]
Tababarka Hoggaanka-La-qabadka Bulshada iyo Tababaraha Horumarinta ee Afyonkarahisar
Tababarka Hoggaanka-La-qabsiga Bulshada ee 1 iyo Tacliinta Horumarinta ayaa ka ambabaxay Ankara bishii Oktoobar si ay kor ugu qaadaan wacyiga ku saabsan qaabka iskaashiga bulshada ee waddankeena, si loo taageero, loo horumariyo loona ballaadhiyo iskaashiga bulshada ee Afyonkarahisar, oo ah tobbanka tobnaad. [More ...]
Dabka Dabka ee Xawaaraha Sare ee Cologne ee Jarmalka
Jarmalka gudaheeda, ayaa tareen xawaare sare leh oo u adeegta dabka dhexmara uu qarxay. In kasta oo tareenka noqday mid aan macquul ahayn, nasiib ahaan noloshu ma lumin. Tareen xawaare dheereeya leh ayaa ka dillaacay Jarmalka. Maamulka ayaa dhintay dabka kadib ama [More ...]
OSD waxay samaysaa waxqabadka wax soo saar ee baabuurta
Sida laga soo xigtay Ururka Warshadaha Gawaarida (OSD), otomotiv Warshadaha gawaarida, mid ka mid ah waaxaha ugu horreeya ee waddankeenna, ayaa sii waday waxqabadka wax soo saarka inkasta oo kor u kaca dhaqdhaqaaqa sarrifka iyo qandaraasyada suuqa. Qaybta Turkey of suuqa baabuurta [More ...]
Jawaabaha dhammaan su'aalaha ku saabsan Kaarka Izmirim Card wuxuu ku yaal Ege Haber! Sida loo helo Kaarka İzmirim Card, kaas oo aruurinaya adeegyo badan oo degmada Metrozmir ee Magaalo Weyn, gaar ahaan gaadiidka dadweynaha, Kaarka loadingzmirim Card [More ...]
Miyuu tareenku ku noqon doonaa Samsun Maanta?
Samsunspor ayaa gurigeeda ku martigelin doonta Gaziantepspor kulankeeda isbuuca ee isbuuca 7 horyaalka. [More ...]
4 Qofka oo Lagu Xukumay Isbaarada Tareen ee Corlu
8 ee degmada Çorlu ee Tekirdağ 25 waxaa la sii daayay bishii Luulyo 4. Saim Bilgin, oo gabadheeda ku weyday shilka, [More ...]
Waxa laga soo qaatay waaxda injineeriyadda madaniga ah ee Farsamada Teknolojiyada, jaamacada Düzce, oo bandhig ka sameysay MÜSİAD Bolu Laanta oo ku saabsan wadada 'Mashruuca Tareenka Sare ee Sare' kaasoo dhex mari doona Ankara iyo Istanbul. Dr. Ayhan Şamandar, mashruucan ayaa ku guuleysan doona Bolu [More ...]
Mashruuca YHT ee Bursa iyo Xarunta Imtixaanka Automotive
Wareegtada Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan ee ku saabsan Diyaargarowga Yatır form ee Barnaamijka Maalgashiga 2019-2021 yayım waxaa lagu daabacay Rasmiga rasmiga ah. Fikradda ugu weyn ee wareegtani waa auster dadweynaha. Horayba waa astaantii ugu horreysay ee Wasiirka Maaliyadda iyo Maaliyadda Berat [More ...]
Mashruuca Sapanca Teleferik Project Cabins
Dowlada hoose ee Sapanca waxaa ka hirgalin doona mashruuca kor u qaadista mashruuca baabuurta xarkaha ee loo isticmaali doono mashruuca ay u isticmaali doonaan muwaadiniinta ku sugan beerta degmada ee lagu dhex qubay. Mashruuca gawaarida fiilada ee loo yaqaan 'cable cable' illaa beerta Degmadda Sapanca si muwaadiniintu u baaraan [More ...]